August 2016 - Ibsaa Jireenyaa
Dhalli namaa jireenya addunyaa tana keessatti dogongoraa fi badii baay’ee raawwata. Osoo dogongoru baate silaa of tuulun of balleessa türe. Dogongora fi baditti lixun akka of hin balleessine immoo balbala tawbaa isaaf banamee jira. Balbala kana seenu yookiin didun mirga isaati. Ulaagaale tawbaaf barbaachisa kan torbaan darbee irraa mee itti fufnu. Read more
Barruun tuni walitti kuufama ji’a Amajjii (January) 2016 peejii jireenya Badhaatuti. Namoonni yommuu peeji kana dawwatan barreefama baay’ee hin argan. Sababa kanaaf isaani laaffisuuf kan ji’a tokko haala kanaan walitti qabame jira. Insha Allah kan ji’oota biroos itti fufa. Read more
Cubbuu fi badiin hangam miidhaa guddaa akka geessu torbaan darbee ilaaluuf yaalle turre. Cubbuu fi badiin gara Rabbiitti dhiyaachun gammachuu fi milkaa’inna daangaa hin qabne akka hin arganne haguuggi(girdoo) ta’a. Yommuu girdoon kuni ka’uu ilmi nama gammachuu fi milkaa’inna dhugaa argata. Ilmi nama dogongore cubbutti kufuun balbala gammachuu fi milkaa’inna ofirratti cufuu danda’a. Balbala isatti cufamee fi girdoo isaa fi gammachuu jiddu jiru kaasuf karaan hundarra gaarii fi tokkichi gara Rabbii dhugaan tawbachuu (deebi’udha). Sababni isaas, gammachuu fi milkaa’inni dhugaan kan argamu Rabbii irraayi. Ilmi namaa hanga fedhe gammachuu fi milkaa’inna argachuuf haa carraaqu yoo Rabbiin balbala rahmata hin bananiif gonkumaa wanta yaade san argachuu hin danda’u. Read more